> Resource > Ladnaansho > Siduu u ACP-EP Memory Data Recovery
Waxaan ka Memory ACP-EP Card soo kaban karto, Files?
Kaliya waxaan formatted aan 8 card Memory GB ACP-EP si qalad ah, oo aan lagu kaydin sawiro qoys oo qaali ah oo badan iyo videos ku yaal. My dhibaato waa in aan xitaa ma haysanno gurmad ah oo ka mid ah files lumay. Hadda waxaan u baahan tahay xoogaa gargaar ah inuu ka soo kabsado xogta ka card Memory ACP-EP. Waan ogahay waa inuu jiraa hab. Fadlan ha i caawi
Halkan waa war wanaagsan ee aad u: files lumay ayaa weli ku qoran kaarka Memory ACP-EP oo ay kaliya aqoonsado xogta geli karin nidaamka. Tani waxay ka dhigan tahay u badan tahay inuu ka soo kabsado xogta ka card Memory ACP-EP inta aad qaado talaabo deg deg ah aad. Waxa ugu muhiimsan in aad waa in ay maanka waa in ay joojiyaan isticmaalka kaarka Memory ACP-EP ka dib markii xogta lumay. Markaas waxaad ka raadin kartaa ACP-EP qalab kabashada xogta Memory ah caawimaad.
Wondershare Data Recovery , ama Wondershare Data Recovery for Mac waa barnaamij sareeya si aad u soo celiyo files ka card Memory ACP-EP oo USB flash drive. Muuqaaladan awood badan ee barnaamijkan awood aad ka bogsato files kharribeen lumay, tirtiray, formatted iyo qalab Memory kaydinta ACP-EP hab halkii fudud oo ammaan ah. Sidaa daraadeed, ayaad ugu soo kaban karto, dhammaan noocyada file ka qalab Memory kaydinta ACP-EP, sida sawiro, videos, files audio, files archive, waraaqaha, iwm
Download version tijaabo ah barnaamijka inuu ka soo kabsado xogta ka ACP-EP qalab lagu kaydiyo Memory hadda ah!
Qabtaan ACP-EP Memory Data Recovery in 3 Talaabooyinka
Tilmaan-ACP EP kabashada xogta Memory lagu sameeyo Windows version of Wondershare Data Recovery, iyo version Mac uu leeyahay hawlaha la mid ah sidoo kale.
Tallaabada 1 Dooro habka soo kabashada ah in la soo celiyo files ka ACP-EP qalab Memory kaydinta
Laga soo bilaabo image hoose, waxaad heli doontaa 3 hababka soo kabashada kadib markii socda Wondershare Data Recovery on your computer.
Waxaad dooran kartaa "File lumay Recovery" mode sida isku day ugu horeysay inuu ka soo kabsado files lumay, formatted oo laga qalab Memory kaydinta ACP-EP.
Fiiro gaar ah: Fadlan hubi in kaarka Memory ACP-EP ama USB waxaa laga garan karaa your computer sameeyo.
Tallaabada 2 baarista ACP-EP kaadhka xusuusta ama USB flash drive
In tallaabadaas, kaliya aad u baahan tahay in ay doortaan aad ACP-EP kaadhka xusuusta ama USB flash drive uu furmo suuqa oo guji "bilow" si aynu barnaamijka waxa laga baarayo.
Haddii files ayaa formatted ka qalab Memory kaydinta ACP-EP, fadlan dooro "Enable Deep Scan" doorasho ee ugu hooseysa ee suuqa.
Tallaabada 3 Ladnaansho files ka card Memory ACP-EP ama USB flash drive
Waxyaabaha laga helaa qalab Memory kaydinta ACP-EP lagu soo bandhigi doonaa in uu furmo. Waxaad ka eegi kartaa magacyada file in la arko sida badan oo files badiyay qalab Memory kaydinta ACP-EP la soo kabsaday karo.
Markaas waxaad dooran kartaa faylasha aad u baahan tahay oo guji "Ladnaansho" button in ay doortaan meel on your computer iyaga badbaadiya.
Fiiro gaar ah: Fadlan ha badbaadiyo xogta soo kabsaday intii lagu jiray geedi socodka soo kabashada si looga fogaado in xogta overwritten ay dib u soo qalab Memory kaydinta ACP-EP.